Global Voices teny Malagasy » Boky Hainahandron’ilay Rosiana Gadra Politika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Septambra 2016 18:51 GMT 1	 · Mpanoratra Darina Gribova Nandika miora
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Sakafo, Akon'ny RuNet
Very zavatra betsaka ianao rehefa mihiboka am-ponja, saingy ny zavatra iray anananao tsy lany holaniana dia ny fotoana hieritreretana momba izay mahaliana anao sy ny fanatsaràna ny talenta anananao. Mahalala tsara ny fiainana an'io ireo Rosiana gadra politika, ary tsy nivaona tamin'izany i Oleg Navalny—rahalahin'ilay mpikatroka mafàna fo malaza mpiady amin'ny kolikoly.
Tamin'ny faran'ny 2014, voaheloka hifonja 3,5 taona i Oleg noho ny vesatra fanodinkodinam-bola amin'ny raharaha iray izay betsaka no nihevitra azy ho resaka politka nataon'ny governemanta hamaizana ny rahalahiny, Alexey, izay navotsotra rehefa nomena sazy mihantona. Nandany ny fotoanany tany ambadiky ny karakara vy i Oleg mba hianarana teny vahiny sy hanaovana sary fametaka  amin'ireo hafatra any anaty Telegram.
Gadra politika iray hafa i Andrei Barabanov izay nahiboka noho ny nandraisany anjara tamin'ilay “Diaben'ny Tapitrisa” izay niafara taminà herisetra tao Maosko ny 6 May 2012. Barabanov dia iray tamin'ireo efa ho roapolo noahiahiana tao anatin'ilay fanadihadiana goavana nataon'ny polisy izay nahavita namarana tanteraka ireo fanaovana hetsika fanoherana ny fitondràna nipariaka nanerana ny renivohitra nandritra ny volana maro talohan'izay. Fony tany am-ponja, nanatsara ny traikefa fahandroan-tsakafo izy.
3,5 taona no nolanian'i Barabanov tany am-ponja, ary nafahana ihany izy nony tonga ny Desambra 2015. Tamin'ny volana lasa iny dia nanokatra kaonty Instagram ity tanora 26 taona ity, antsoina hoe “Russidit” (na Ireo Laingan'ny “Rus’ any Am-Ponja”), ka ao no izaràny karazana hainahandro isankarazany izay nianarany niaraka tamin'ireo namany tao am-ponja. Ampahany amin'ny fanentanana nandritra ny volana iray ilay kaonty Instagram notohanan'ny tetikasa fanaovantsoa natao hanampiana ireo voaheloka sy ny fianakavian'izy ireny. Antenain'i Barabanov ny hitondra fampahatsiahivana ho an'ireo mpampahalala vaovao momba ny “Raharaha Bolotnoe,” izay no ahafantaran'ny ao Rosia ankehitriny ilay famoriambahoaka tamin'ny May 2012.
Omen'ny lisitra ao anatin'ilay boky hainahandro ety anaty aterineto ny dingana voalohany fikarakarana tarte rehefa fety ao am-ponja : “manorena fifampitokisana amin'izay mpiara-mifonja aminao.” Ny dingana farany dia ny fampahatsiahivana anao hizara ny tarte nokarakarainao amin'ireo namanao.
Taharo ilaina amin'ilay nahandron'i Barabanov ny feta fanaovana tarte, ny ronono mandry, paiso iray boaty, frezy iray boaty, voanjo, ronono ary sokola—samy amidy ao amin'ilay kaoperativa ao am-ponja daholo ireo rehetra ireo mandritra ireo andro manokana anomezana alàlana ny mpifonja mba hividy izay ilainy.
Sary iray nalefan'i Фонд “Русь Сидящая” (@russidit)  tamin'ny 17 Aog 2016 tamin'ny 11:40am PDT
Ahitàna toromarika ihany koa ao anatin'ìilay boky hainahandron'i Barabanov, momba ny fanaovana “hors d'oeuvres” ampiasàna tahon'afokasoka. Hoy ny soratany : “Tao amin'ny fonjan'i Butyrka aho no nankalaza ny Alin'ny Taombaovao 2014. Efa herinandro maro nialoha no nikarakaranay sy ny namako azy, nangataka tamin'ireo havanay mba hitondra ireo taharo sarotra tadiavina. Nividy ny sasantsasany ihany koa tao amin'ilay toeram-pivarotana iray ao am-ponja, ary naka ny ovy tamin'ireo sakafo tao amin'ny toeram-pisakafoanana mba hikarakaràna salady Rosiana atsy aoriana kely.”
Lazain'i Barabanov fa fanirian'ireo mpiara-mifonja ny mba hahatsapa “ny fanahin'ny Taombaovao mahazatra” sy “ilay rivotra iainana manokana rehefa fety”, mba hanadinoana ireo zavamisy manodidina azy, na ho fotoana fohy ihany aza.
Sary nalefan'i Фонд “Русь Сидящая” (@russidit)  tamin'ny 22 Aog. 2016 – 10:50am PDT
Sakafon'ny tsy mihinana hena daholo no fomba manokana fikarakaran'i Barabanov nahandro: paty tonga dia vonona, lasopy fromazy, salady misy tsaramaso, sy ny sisa. Asehon'ilay tetikasa Instagram ihany koa ny fomba fanamboarana “moonshine” miainga amin'ny zavamisy ao am-ponja (“vokatra avy amin'ny alikaola tamin'ilay fanentanana” natolotr'i Ilya Guschin, izay efa niaina 2,5 taona mahery tao am-ponja) sy paty misy sokola toy ny Nutella (noforonin'i Alexander Margolin, izay efa 3 taona no tany ambadiky ny karakara vy).
Toa an'i Barabanov, dia migadra noho ilay Raharaha Bolotnoe koa i Guschin sy Margolin. Noho izay fifandrifian-javatra mampalahelo izay, kaonty Instagram iray ihany koa no ifampizaran'ireo lehilahy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/09/22/89012/
 Sary iray nalefan'i Фонд “Русь Сидящая” (@russidit): https://www.instagram.com/p/BJOGA9Lg4W7/
 Sary nalefan'i Фонд “Русь Сидящая” (@russidit): https://www.instagram.com/p/BJa4ScYg17E/